Raharaha fakana an-keriny: serzà-sefo nahatrarana basy, grenady, bala | NewsMada
Bala marobe, grenady mahery vaika, basy PA… Santionany amin’ireo fitaovam-piadiana mahery vaika tratra tany amin’ireo jiolahy nikasa hanao kidnapping tratran’ny zandary. Anisan’ny atidohan’izany ny Serzà-sefo…
Mazava izao fa tena mpitandro filaminana ny ankamaroan’ny ao ambadiky ny raharaha fakana an-keriny. Voasambotry ny zandary ny jiolahy telo, voarohirohy amina raharaha fakana an-keriny ka serzà-sefo ny iray amin’izy ireo, araka ny tatitra nampitain’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa. Tratra niaraka tamin’izy ireo koa ny bala marobe miisa 300 sy grenady mahery vaika ary basy PA efatra, niaraka tamina kara-panondron’ny jiolahy iray amin’ny anaran’olona telo samy hafa. Raha ny loharanom-baovao, niainga teo Analakely ny fisamborana ity jiolahy ity taorian’ny fanangonam-baovao rehetra teo am-pelatanan’ny zandary. Tratra tany aminy ny basy PA roa niaraka tamin’ny bala rehefa tratran’ny vela-pandriky ny zandary. Nandritra ny famotorana azy indray ny nanondroany ilay serzà-sefo, tompon’ireo basy sy balana Kalachnikov marobe (mbola karohina ity basy Kalach ity). Nitohy ihany ny famotorana ka tratra tao amina trano iray fametrahan’izy ireo ilay olona alaina an-keriny eny Ambatobe ireo grenady mahery vaika niaraka tamin’ny saron-tava. Teo am-piomanomanana ny hanao fakana an-keriny ireto jiolahy ireo no tratran’ny zandary.
Tao anatin’ny iray volana : basy 32 azon’ny zandary…
“Ao anatin’ny tondrozotran’ny zandarimariam-pirenena hatrany ny fanadiovana anatiny. Maromaro ireo zandary efa naiditra am-ponja fa mbola te hanamafy ireo zandary hatrany aho hoe aoka izay ny tsy fanarahan-dalàna, aoka izay ny tsy fanarahana ny fitsipi-pifehezana. Mifanindran-dalana amin’izay kosa, misy ireo zandary tena miasa ary miasa mafy any ambanivohitra any. Ireny niaraha-nahita ireny ny vokatra tamin’ny alalan’ireo raharaha fakana an-keriny”, hoy hatrany ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena. Nambarany fa basy miisa 32 no azon’ny zandary teny am-pelatanan’ny dahalo tao anatin’ny iray volana ka basy mahery vaika ny valo amin’ireo (ahitana Kalach roa, Mas 36, PA). Tao amin’ny faritra Amoron’i Mania (Isandra sy Ikalamavony) ny nahatrarana basy Mas 36 sy PA, raha basy vita gasy kosa ny 14. Toy izany koa ny fanafihan-dahalo nahatrarana basy Mas 36 iray.